October 24, 2020 - Achawlaymyar
ပါးစပ်ကနေပဲချစ်ပြပြီးတကယ်မချစ်တဲ့ယောကျာ်းတွေရဲ့ အမူအကျင့်များ ချစ်သူတွေဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ဂရုစိုက်၊နွေးထွေးကြပါတယ်။ ပါးစပ်ကနေချစ်တယ်လို့ တဖွဖွပြောနေပြီး လက်တွေ့မှာ ဂရုမစိုက်တာဟာ တကယ်မချစ်လို့ဆိုတာပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ သင့်ကိုသင့်ရဲ့ချစ်သူက ပါးစပ်ကနေပဲချစ်ပြနေပြီး တကယ်မချစ်ဘူး၊ သင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာ ဒီအချက်တွေက သက်သေပါပဲ။ (၁) သင့်အတွက်အချိန်မပေးဘူး ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များများ ကိုယ့်အတွက်အချိန်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်၊ အချိန်လည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အချိန်မရှိဘူး၊ မအားဘူး၊ အလုပ်တွေများနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ဟာ တကယ်မချစ်တဲ့သူ၊ သူတို့ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကို ပေးတတ်တဲ့ဆင်ခြေပါ။ တကယ်ချစ်တဲ့သူဟာ သူချစ်တဲ့သူအတွက် လိုလိုလားလားကို အချိန်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ (၂) အရာအားလုံးအတွက်သင့်ကိုအပြစ်တင်တတ်တယ် ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင် အပြစ်ရယ်လို့ မမြင်ဘဲ အရာအားလုံးကခွင့်လွှတ်ချင်စရာပါ။ မချစ်တဲ့သူအတွက်ကတော့ ဘာလုပ်လုပ်အပြစ်တွေမြင်နေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီး သင့်ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုမမြင်ဘဲ အပြစ်တွေပဲမြင်နေတဲ့သူအတွက် ခံစားနေမယ်ဆိုရင် မတန်ပါဘူး။ (၃) ဘာလုပ္လုပ္မတိုင္ပင္ဘူး လူတစ်ယောက်ကတကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် ဘာပဲလုပ်လုပ်သူချစ်တဲ့သူကိုတိုင်ပင်ချင်တယ်၊ ချစ်တဲ့သူရဲ့အမြင်ကိုသိချင်တယ်၊ ချစ်တဲ့သူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုလိုချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်၊ … Read more
မပြတ်သားရင် အကြိမ်ကြိမ်နာကျင်ရပေမယ့် ပြတ်သားလိုက်တာက တစ်ခါပဲနာကျင်ရမှာပါ….
မပြတ်သားရင် အကြိမ်ကြိမ်နာကျင်ရပေမယ့် ပြတ်သားလိုက်တာက တစ်ခါပဲနာကျင်ရမှာပါ မပြတ်သားရင် အကြိမ်ကြိမ်နာကျင်ရပေမယ့် ပြတ်သားလိုက်တာက တစ်ခါပဲနာကျင်ရမှာပါ မာနကိုဦးမော့ထားပါ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို နားမလည်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို အတင်းအကျပ်ဖက်တွယ်မထားပါနဲ့။ ကိုယ့်အနစ်နာခံမူတွေကို တန်ဖိုးမထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ပင်ပန်းတကြီးဆုပ်ကိုင်မထားပါနဲ့။ ကိုယ့်ပေးဆပ်မူတွေကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ရူးမတတ်လည်းတွယ်တာမနေပါနဲ့။ ကိုယ်ကတန်ဖိုးထားလေလေ လျစ်လျူရူခံရလေ… ကိုယ့်ကအနစ်နာခံလေလေ အနိုင်ယူပြလေ… ကိုယ်ကချစ်ပြလေလေ အပေါစားလ်ုိ့ထင်လေ… ကိုယ်ကပေးဆပ်ပြလေလေ တန်ဖိုးမထားလေလေမို့.. စွန့်လွှတ်လိုက်တာကပိုမကောင်းဘူးလား…? မိန်းမသားတွေဆိုတာ ဥပေက္ခာထက်အကြင်နာကိုသာလိုချင်ကြတာပါ၊ ချစ်ခြင်းတရားကင်းတဲ့ အေးစက်စက်ရင်ခွင်တစ်စုံမှာ ခိုဝင်နေမယ့်အစား နွေးထွေးမူမရှိတော့တဲ့ လက်တစ်စုံကိုဆုပ်ကိုင်နေမယ့်အစား ကြင်နာခြင်းကင်းတဲ့တုန့်ပြန်မူတွေကို ဖက်တွယ်နေမယ့်အစား ကျောခိုင်းလ်ုက်တာကပိုအေးချမ်းပါတယ်။ မပြတ်သားရင် အကြိမ်ကြိမ်နာကျင်ရပေမယ့် ပြတ်သားလိုက်တာက တစ်ခါပဲနာကျင်ရမှာပါ။ လမ်းဟောင်းကိုပြစ်ပြီး လမ်းသစ်ထွင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်မာနကိုဖြန့်ခင်းပြီး တိုးရိူးတောင်းပန်ရမှာမတန်ပါဘူး။ မိန်းမသားတစ်ယောက်က အသွားအပြန်မရှိတော့တဲ့ချစ်ခြင်းကို က်ုယ့်ရဲ့မာနနဲ့တန်ဖိုးကို ချိုးနှိမ်ပြီးမျှော်လင့်နေမယ့်အစား အရင်ကထက် smart ကျကျနဲ့ လှသထက်လှအောင်နေုပြီး မာနကိုဦးမော့ထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါစေ။ … Read more
လူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်အစ စာလုံးကိုသိရင် သူရဲ့အကြောင်းကို ခန့်မှန်းကြည့်မယ်…..
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို ဖော်ပြလေ့ရှိတယ်လို့ ယုံပါရဲ့လား။ ဥပမာ သူ့နာမည်က Su Su ဆိုရင် နာမည်အစ စာလုံးက S ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့နာမည်အစစာလုံး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သိချင်တဲ့လူရဲ့ နာမည်အစစာလုံးကိုကြည့်ပြီး သူက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ အကဲခတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ A, H, I, O, Y ဂျိုကာနဲ့တူတဲ့လူတွေပါ။ လူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သူတွေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဝမ်းနည်းတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ တခြားစိတ်ခံစားချက်တွေကို ဘယ်သူမှမသိအောင် ကြိတ်ခံစားပြီး ကိုယ့်ကြောင့် သူများစိတ်မညစ်အောင် နေတတ်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။ အမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေပြတတ်တော့ လူချစ်လူခင်ပေါတယ်။ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းတယ်။ အချစ်ရေးမှာ ကျန်ရစ်ဖြစ်ခဲ့ရတာများတယ်။ စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့အထဲမှာလည်း ပါတယ်။ B, C, L, M, N သူတို့ကျတော့ လက်ဆောင်ဘူးနဲ့တူတယ်။ အထဲမှာ … Read more
ဗုဒ္ဓဟူးလေးကို ချစ်မိနေရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ 💕💕
ဗုဒ္ဓဟူးလေးကို ချစ်မိနေရင်💕 1~ငါအရူးလေးတျောက်ကို ချစ်နေတာပါလားလို့တွေးလိုက်ပါ။ ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို ထိန်းနေရတာပါလားလို့ သိလိုက်ပါ။ တိမ်ဆိုင်တွေလို ရာသီဥတုလိုပဲ သူတို့ရဲ့စိတ်လေးတွေက ခဏခဏ ထ ဖောက်တတ်လို့ပါ။😁 2~သူတို့ကိုသည်းခံနိုင်မှချစ်ပါ။ ရစ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရစ်ရမလဲဆိုတာပဲ သူတို့အတွေးထဲမှာရှိနေတတ်တယ်။😍 အရမ်းအရစ်သန်သလောက်ကို အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူလေးတွေပါ။ 3~သူတို့လေးတွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာ အရမ်းကံကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်လုပ် သူတို့အတွေးထဲမှာမင်းကို အမြဲနေရာပေးထားတတ်တယ်။😘 4~ဆိုးတာတစ်ခုက သူတို့အပေါ် ဆိုးရင်မကြိုက်ကြဘူး။ သူတို့ကပဲဆိုးချင်ကြတာ ကလေးလေးတျောက်လိုပဲ။ဒါပေမယ့် ကလေးထက်ဆိုးပါတယ်😘 တခါတလေ တယောက်တည်း ကျိတ်ပီးခံစားနေတတ်တယ် ဘယ်သူကိုမှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြဘူး သူတို့ဖွင့်ပြောတယ်ဆိုရင် မင်းကို သူအရမ်းချစ်လို့ပဲ။ 5~အရမ်းဖော်ရွေမပြတတ်ဘူး။ ရင်ထဲမှရှိနေပေမယ့် အပြင်ကို ထုတ်မပြတတ်ဘူး။ မာနကြီးတယ်ထင်ရလောက်အောင် အနေထိုင်က တည်လွန်းပေမယ့် သူတို့အရမ်းခင်တဲ့သူ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဆိုရင်တော့ပေါတောတောနဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရူးလေးတွေပါ😍 6~တကယ်ကို အချစ်ကြီးတဲ့ သူလေးတွေပါ။ အများကြီးကြီးလည်း မချစ်တတ်ဘူး။ ချစ်တဲ့သူကိုပဲ … Read more
ဖုန်းအသုံးများတဲ့သူတိုင်းလုပ်ပေးသင့်တဲ့မျက်စိအားကောင်းစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများ အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းလိုလို ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုကြပြီး မျက်စိကို တစ်ချိန်လုံး အနားမရအောင် ကြည့်နေကြပါတယ်။ screen အလင်းရောင်ကို တောက်လျှောက် ကြည့်နေတဲ့အခါ ရေရှည်မှာ မျက်စိကိုထိခိုက်လာစေပါတယ်။ screen အလင်းရောင် အကြည့်များလို့ ပင်ပန်းပြီး အားနည်းနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို သွေးလှည့် ပတ်မှုကောင်းစေပြီး အမြင်ကြည်လင်စေဖို့ နေ့စဉ်လုပ် ပေးသင့်တဲ့ မျက်လုံးလေ့ကျင့် ခန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းအသုံးများတဲ့သူတိုင်းလုပ်ပေးသင့်တဲ့မျက်စိအားကောင်းစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများ (၁) နှစ်မိနစ်မျက်တောင်ခတ်ခြင်း screen ကိုကြည့် တာများတဲ့အခါ မျက်တောင် ခတ်တဲ့အကြိမ်အရေ အတွက်နည်းပြီး မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာကို ဆက်တိုက်ကြည့်ပြီး တဲ့အခါ နှစ်မိနစ်လောက်မျက်တောင်ခတ်ပေးပါ။ မျက်လုံးညောင်း ညာနေတာ ကိုပြေစေပြီး အမြင်ကြည်လင် စေပါတယ်။ (၂) မျက်နှာကျက် ကိုမော့ကြည့်ပြီး ဦးခေါင်းဘယ် … Read more
ပရိသတျကွီးရေ နိုငျငံကြျောသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈသလို (ရနျကုနျ) နာရေးကူညီမှုအသငျးရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈတဲ့ ဦးကြျောသူ ကတော့ ပရဟိတလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျပေးရငျး Covid ရောဂါကူးစကျခံထားရတာကို ပရိသတျတှေ သိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ ဦးကြျောသူ ကိုတော့ ရနျကုနျ ဝဘောဂီ ဆေးရုံကွီးမှာ ဆေးကုသမှုကို ကောငျးစှာခံယူနတောဖွဈပါတယျ။ ယနထေိ့ ဦးကြျောသူဟာ ရောဂါလက်ခဏာမပွပဲ ကနျြးကနျြးမာမာ နဲ့ ရှိနပေါတယျ။ ဦးကြျောသူရဲ့ ဆေးကုသမှုရဲ့နောကျကိုတော့ မျောလျဒယျသရုပျဆောငျ ထှနျးကိုကို က လိုကျပါအဖျောပွု ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။ ယခုမှာတော့ ဦးကြျောသူက ဆေးကုသမှုခံယူနရေငျး ထူးခွားတဲ့ အဖွဈအပကျြလေးကို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ “ဝဘောဂီ သို့ကွှရောကျလာသညျ့ မိုငျးဖုနျးဆရာတျောဘုရားကွီး……ယမနျနညေ့ဖကျ ဝဘောဂီဆေးရုံတှငျ ညမအိပျခငျ လှယျအိတျထဲမှ မိမိကိုယျနှငျ့မကှာယူဆောငျလရှေိ့သော သာသနာပွုလှယျအိတျငယျလေးထဲမှ မိုငျးဖုနျးဆရာတျောကွီး၏ပုံတျော အသေးအားခေါငျးအုံးပျေါတငျ၍ ဘုရားဝတျပွု၊ဂုဏျတျောပှားကာ နဂါးမငျးမြားအားမတ်ေတာပို့သခဲ့ပါသညျ။ ယနနေံ့နကျစာ စားအပွီး … Read more
ဒီ(၁၆)ခကျြကို အလှတျမှတျနိုငျရငျ မငျးဘဝ ဘယျတော့မှ ဒုက်ခဆိုတာ မရှိနိုငျတော့ပါ